Ka taageer Dutchtown on Sii STL Day • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Ku taageer Dutchtown maalinta Sii STL
Posted on Waxaa laga yaabaa 5th, 2021
DT2 • Downtown Dutchtown waxay ku jirtaa meel muhiim u ah kobcinta awooda. Iyadoo la shaqaaleysiinayo xubin shaqaale ah oo waqti dhiman ah iyo aasaasidda guddiyadayada UrbanMain, waxaan diyaar u nahay inaan kobcno oo aan qaadno caqabado waaweyn.
On Sii STL Day, May 6th, waxaan ka codsaneynaa deriska iyo saaxiibada inay naga caawiyaan inaan sii wadno koritaanka iyo dhisida xawaare ku aadan dhanka Dutchtown ka wanaagsan. Hada ku deeqo!
Caymiska Crawford-Butz ayaa samaysay dalab aad u deeqsinimo ah oo u dhigma ilaa $ 5,000 oo ah tabarucaadyo Maalinta Sii STL. Thanks to kulankaan, waad awoodaa labanlaab saamaynta deeqdaada oo naga caawi sidii aan u gaari lahayn hadafkeena lacag ururinta $ 10,000.
Ku deeq maanta!
Sannadkan, waxaan rajeyneynaa ururin lacag loogu talagalay barnaamijka deeqda wajiga ganacsiga, sanduuqa baahiyaha degdegga ah, rakibidda farshaxanka dadweynaha, tababarro ganacsi oo yaryar iyo adeegyo karti-dhisid, iyo dhacdooyin badan oo bulshada ah. Waan ognahay dhismaha kaabayaasha jirka iyo dhaqaalaha inay muhiim u yihiin dhisida kaabayaasha bulshada. Waxaan leenahay aragti weyn, laakiin waxaan u baahanahay caawimaad si aan u xaqiijino!
Ilaa dhowaan, DT2 waxaa si gaar ah u shaqeynayay mutadawiciin. Iyada oo loo marayo lacag ururin dheeraad ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan sii wadno shaqaale waqti dhiman ah si ay nooga caawiso abaabulka tabaruceyaasheenna, u codsanno deeqaha, u ururinno lacag dheeri ah, iyo inaan hagaajino howlahayaga. Dhisidda awooddan dheeriga ah ayaa fure u ah hirgelintayada Hindisaha UrbanMain, oo ah barnaamijkii ugu horreeyay noociisa ah ee ka dhaca Missouri kaasoo ujeedkiisu yahay soo nooleynta marinnada ganacsiga iyo xaafadaha ku xeeran.
Fadlan naga caawi si aan xawaaraha u sii socono! In kasta oo dhibaatada caafimaad ay jirto dhamaanteen waan ka soo wada shaqeynay bilihii ugu dambeeyay, DT2 waxay soo jiidatay xiiso badan, waxay keeneen mutadawiciin cusub, waxayna soo saareen natiijooyin badan oo ku saabsan Dutchtown si aan horay loo arag. Waxaan diyaar u nahay inaan sii kobcino waxbadan waxaana rajeyneynaa inaan qabano mashruucyo waawayn oo kafiican si aan u gaarsiino xaafad kafiican qof walba.
Iyada oo deeqda la midka ah ee cajiibka ahi ay gaadhayso ilaa $ 5,000 laga bilaabo Caymiska Crawford-Butz, waxaan ku gaari karnaa talaabooyin waa weyn hadafkeena ah inaan balaarino awooda oo aan waxbadan siino deriskeena, ganacsiyada, iyo bulshada guud ahaan. Fadlan deeq maanta!
Maalmo Kale Iyo Siyaabo Kale Oo Loogu Deeqo
Haddii aadan wax ku darsan karin Maalinta Sii STL, weli waxaan mar walba adeegsan karnaa gargaarkaaga! Booqasho dutchtownstl.org/donate in la sameeyo a hal mar or joogtaynta deeqda bil kasta. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa waxbadan ka akhriso shaqada aan qabanay sanadkii la soo dhaafay.
Ku Bixin Hal Mar Joogtaynta Deeqda
Filimka hoos Xisaabiyeyaasha. Muuji dhamaan qeybaha. DT2, Dutchtown, Xisaabiyeyaasha, Iyo UrbanMain. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Waxaa laga yaabaa 5th, 2021 .
DutchtownSTL.org Xisaabiyeyaasha Ku taageer Dutchtown maalinta Sii STL